Somali CALAAMADDA BAHALKA! In kitaabka Muujintii (buugga la soo dhaafay ee Kitaabka Quduuska ah) aan la uuna ka digay helo sumaddii bahalka (i.e. ka gees ah!). Laakiin waxa ay dhab ahaan waa sumaddii bahalka THE? Oo ma ay calaamaddu this haysan wax ay sameeyaan la ah magaca bahalka ama nambarka 666? Or, ay calaamaddu ku taal wax bahalka gebi ahaanba ka duwan & gaar ah magaca bahalka iyo tirada 666? Iyo waxa ay dhab ahaan waa magaca bahalka kasta? Ma shaqsi ahaan, quruun, koox ka mid ah quruumaha, ama kaniisad? Oo waxa ku saabsan waxa ay calaamaddu-waa suugaan, CALAAMADDA JIRKA? Ama ma waxaa taa tusaale, macnaha astaan? Bal aan ka bilowno off in our baaris in ay ka jawaabaan su'aalahan by leexdo first to Muujintii 13: 16-17. Halkan waxa aan u sheegay in bahalka "looga baahan yahay qof kasta-yar iyo weynba, Taajirka iyo miskiinku, xor iyo addoon-in la siiyo CALAAMADDA a on gacanta midigta ama foodda. Oo ninna ma iibsan karo ama wax ka iibisid aan iin lahayn in, kaas oo ahaa mid ka mid ah magaca bahalka ama nambarka  magaca Alle "(NLT). Sidaas daraaddeed Kitaabka taas oo ka dhigaysa waxaa cad in sumaddii bahalka si fudud waa mid ah magaca bahalka ama nambarka magiciisa matalaa. Sidaa darteed, isagoo sumaddii bahalka aad ku waa isku mid sida isagoo ah magaca bahalka aad on (ama NUMBER in ay ka dhigan tahay inuu magiciisa-666!). NUMER OF BAHALKA-666! Laakiin sababta ay tirada 666? Sidee tirada this wakiil magiciisa? Waa hagaag, ha ee ha Kitaabka Quduuska ah ka jawaabo su'aashaas. Muujintii 13:18 (LB) - "... qiimaha tirsi mid ah xaashiyaha ayaa magiciisa ku dar si 666." Kitaabka Tani ayaa bayaan ay muujinaysaa in 666 waa uun QIIMAHA ee wadarta tiro ka mid ah magaca bahalka ah! Tusaale ahaan, magaca "VIX." Haddii aan u isticmaalno "tiro Roman" ka dibna V = 5, waxaan = 1, & X = 10. Markaas haddii aan ku daro qiimaha tirsi ah warqad kasta oo magaca this (5 + 1 + 10) waxaan ka heli 16. Sidaa darteed, Vix suurto gal ma noqon karto bahalka maxaa yeelay, magiciisa oo keliya kor ku darayaa in 16 (halka magaca bahalka kor u dari doonaa 666). Laakiin haddii Vix ma bahalka waa, waa kuma? WHO WAA BAHALKA? Sidaas WHO waa this bahalka (i.e. ka gees ah)? waa Superpower United Yurub (a soo noolaaday "Quduuska ah" Roman Empire) sida la baraa qaar ka mid ah? Ama waa bahalka oo amiir u ahaa nidaamka this soo noolaaday? Bahalka waa calaamad LABADA labada-ka boqortooyadiisa iyo hogaamiyaha! Laakiin Ugu horeyn waxa uu u taagan yahay ay HOGAAMIYE. Si ay u caddeeyaan in ay u taagan tahay dhammaadka wakhtiga hoggaamiyaha siyaasadda ee nidaamka this ugu dhakhsaha badan-soo socda aynu u noqon oo Qorniin kale ee kitaabka Muujintii. Muujintii 19: 20- "Markaas bahalkii la qabsaday, iyo nebigii beenta ahaa .... Labadani waxaa lagu tuuray iyagoo noolnool baddii dabka ahayd oo baaruuddu ka ololaysay "(NKJ). Kitaabka waxay si cad u muujinaysaa in bahalka ka dhigan SHAKHSIGA dhammaadka wakhtiga ah, waayo, isagu iyo nebigii beenta ahaa labaduba waa lagu tuuray baddii dabka ahayd! SUUGAAN, CALAAMADDA JIRKA? Laakiin waxa ay dhab ahaan ay calaamaddu ku taal oo ka mid ah bahalka, sumadda this hoggaamiye siyaasadeed dhammaadka wakhtiga? waxa ay noqon doontaa JIRKA ah, suugaan CALAAMADDA (ama waa calaamadda this uun tusaale, isagoo nooc ka mid ah qarsoon, macnaha asalka ah)? sumaddii bahalka ah waxa uu noqon doonaa calaamad suugaan jirka! In Muujintii 13:16 & 14:11 dhowr tarjumaadaha kala duwan ee Kitaabka Quduuska ah (GW, NOG, EXB, NEB, & JB ah) Dawladdu in sumaddii bahalka uu noqon doono "ku tilmaamay" on aadanaha. AMPC The, NABRE, & gobolka EXB in sumaddii bahalka la tuntay doonaa dadka. Laakiin waxaan jeclaan jidka Bible Living u tarjumay Labadan aayadood ugu fiican, sida ay ku dhawaaqdo in sumaddii bahalka uu noqon doono "TATTOOED" on aadanuhu! Laakiin iyadoo aan loo eegin haddii sumaddii bahalka la tilmaamay, tuntay, ama tattooed, dhammaan turjumaadaha kuwaas oo si wadajir ah isku raaceen in ay calaamaddu ku taal noqon doonaa CALAAMADDA suugaan JIRKA in dadka kale si fudud u awoodi doonaan in ay arkaan! QAATA CALAAMADDA = DAACAD U SHAYDDAAN YAHOW, Haddii aad akhrido kitaabka Muujintii aad si taxadir leh (gaar ahaan cutubka 14) waxaad arki doontaa in qof kasta oo ay raalli ka aqbala sumadda bahalka la marsiinayo ciqaab doono by Ilaah. Laakiin Ilaah runtii ma aan ciqaabi doono qof sumadda this GARAAD KHASABKA iyaga ku soo kor, mana u ciqaabi doonaa qof aan garanayn aqbala sumadda this (sida qaar ka mid ah aragtiyaha shirqool baro)! Qofka ayaa og, iyagoo raalli ka aqbalaa sumadda. Laakiin qof kasta oo ay raalli ka og ogolaanaya sumaddii bahalka ah in la dul dhigo ama jirkeeda (sidoo kale ay gacanta midig ama wejiga) doonaa si toos ah u socday ka gees ah Ilaah! Halkii la addeeco ay wax abuura, waxay halkii la addeeco Shayddaan yahow, Waxay in nuxurka noqon doonaa ballan ay DAACAD iyo daacad shaydaan Ibliiska (eeg Muujintii 13:16 labada amp & EXB tarjumaadaha Kitaabka Quduuska ah)! Oo kuwa sidaas samayn la uuna cadaabay doonaa by Ilaah! Oo iyana waxay ahaan cudurdaar la'aan doono, waayo, ma aha oo kaliya waxaa jiri doona laba markhaati (ama qorniintii nebiyada) oo u sheeg ma inay caabudaan bahalkii (ama uu taalada) ama heli sumaddii, laakiin malaa'ig samada ka timid oo kale ayaa dadka dunida degganu amri doonaa sidaas ma aha in uu sameeyo (Muujintii 14: 9)! MAGACA BAHALKA? Sidaas daraaddeed, waa maxay magaca bahalka? Oo bal yaa hoggaamiye siyaasadeed dhammaadka wakhtiga ahaan doontaa? Ku alla kii uu yahay, mid ka mid ah wax aan ogahay xaqiiqda ah, warqadihii magiciisa kor ku dari doonaa in 666! Laakiin qof ka fikiri kartaa magac ka sii wanaagsan Roman? First of dhan, "Roman" waxaa loo turjumi karaa sida "LATEINOS" ee luqada Giriigga. (Laakiin sababta ay u isticmaalaan luqadda Giriigga? Maxaa yeelay, inta badan ee Axdiga Cusub waxaa markii hore ku qoran Greek-ka mid yihiin kitaabka Muujintii). In luqadda Giriigga "L" ka dhigan tahay tirada 30, "A" waa 1, "T" waa 300, "E" waa 5, "I" waa 10, "N" waa 50, "O" waa 70, iyo " S "waa 200. iyaga soo dar (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) iyo waxa kuu soo baxaayo? 666! Marka labaad, haddii uu magaca ahaayeen "Roman," waxay la mid ah cilmiga midnimada noqon lahaa sida waxa ay ka dhigan lahaa saddex waxyaalood oo ka mid ah. Ma aha oo kaliya waxa uu noqon lahaa magaca this dhammaadka wakhtiga hoggaamiye siyaasadeed, laakiin waxa ay sidoo kale ka dhigan Boqortooyada Roomaanka iyo sidoo kale Roomaanka (Catholic) Church. DIGNIIN! Waxba ma ahan wixii aad samayn mustaqbalka, MARNA (xaalad kasta wax alla wixii!) Aqbalin in sumaddii bahalka ama isaga (i.e. ka gees ah) ama uu taalada caabudaan !!! "Carruur yahay yaryari, waa saacaddii u dambaysay, iyo sidaad u maqasheen oo ... ka gees ah ayaa la socda ... Ninka dembiga ... wiilka halaagga maahee, kan ka geesta ah oo iska sarraysiiya wax alla waxa Ilaah la ama la caabudo oo ... Waxa uu xitaa ku fadhiisan doonaa yidhaahdo oo dhan iyo macbudka Ilaah, isagoo sheegtay inuu qudhiisu yahay Ilaah "(1 Yooxanaa 2:18 NKJ; 2 Tesaloniika 2: 3-4 NKJ; 2 Tesaloniika 2:.. 4 NLT). "Markaasuu afkiisii ​​u furay inuu ku cayda ka gees ah Ilaah, iyo inuu caayo magiciisa, taambuugga, iyo kuwa samada deggan. Oo waxaa la siiyey isaga inay kula dagaallamo quduusiinta oo [DAACAD Masiixiyiinta] iyo in ay ka gudbaan [guulaysi] iyaga. Oo amar la siiyey in ka badan kasta qabiilka, af kasta iyo quruun. Oo isaga, aan magacooda lagu qorin kitaabka nolosha caabudi kuwa dhulka deggan oo dhan doonaa ... "(Muujintii 13: 6-8 NKJ). "Haddii nin caabudo bahalka [i.e. ka gees ah] iyo sanamkiisa [i.e. uu taalada], oo aqbala sumadda uu fooddiisa ama waa inuu gacanta saaraa, isaga qudhiisuse wuxuu ka cabbi doonaa khamriga cadhada Ilaah, kaas oo la soo daadshay xoog buuxa galay koobkii dhirifkiisa. Oo waxaa isaga lagu silcin doonaa dab iyo baaruud joogaan tan malaa'igaha quduuska ah iyo joogitaanka Wanka [i.e. Ciise Masiix]. Oo qiiqa caddibaaddooda weligiis iyo weligiis u kori, waxayna leeyihiin habeen iyo maalin nasasho ma ama, oo kuwa caabuda bahalka iyo sanamkiisa, iyo ku alla kii aqbala sumadda magiciisa "(Muujintii 14: 9-11 NKJ). Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sumaddii bahalka ah, fadlan akhri "Muujintii Yimaado Alive" iyo buugaag waxaa laga heli karaa BILAASH ee "The ka gees ah & The Final 7 Years.": www.TheBibleComesAlive.com somali = somali Haddii aad jeclaan lahayd in la akhriyo mid ka mid ah articles ama buugaag aan afkaaga ku qoran, kaliya riix link soo socda: https://translate.google.com. link Tani turjumi doonaa dhammaan qoraallada aan ka Ingiriisi si afkaaga. Laakiin waxaa kaliya turjumi karaa 1 page waqti. — Other Books & Articles in Your Language — If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.
In kitaabka Muujintii (buugga la soo dhaafay ee Kitaabka Quduuska ah) aan la uuna ka digay helo sumaddii bahalka (i.e. ka gees ah!). Laakiin waxa ay dhab ahaan waa sumaddii bahalka THE? Oo ma ay calaamaddu this haysan wax ay sameeyaan la ah magaca bahalka ama nambarka 666? Or, ay calaamaddu ku taal wax bahalka gebi ahaanba ka duwan & gaar ah magaca bahalka iyo tirada 666? Iyo waxa ay dhab ahaan waa magaca bahalka kasta? Ma shaqsi ahaan, quruun, koox ka mid ah quruumaha, ama kaniisad? Oo waxa ku saabsan waxa ay calaamaddu-waa suugaan, CALAAMADDA JIRKA? Ama ma waxaa taa tusaale, macnaha astaan?
Bal aan ka bilowno off in our baaris in ay ka jawaabaan su'aalahan by leexdo first to Muujintii 13: 16-17. Halkan waxa aan u sheegay in bahalka "looga baahan yahay qof kasta-yar iyo weynba, Taajirka iyo miskiinku, xor iyo addoon-in la siiyo CALAAMADDA a on gacanta midigta ama foodda. Oo ninna ma iibsan karo ama wax ka iibisid aan iin lahayn in, kaas oo ahaa mid ka mid ah magaca bahalka ama nambarka  magaca Alle "(NLT). Sidaas daraaddeed Kitaabka taas oo ka dhigaysa waxaa cad in sumaddii bahalka si fudud waa mid ah magaca bahalka ama nambarka magiciisa matalaa. Sidaa darteed, isagoo sumaddii bahalka aad ku waa isku mid sida isagoo ah magaca bahalka aad on (ama NUMBER in ay ka dhigan tahay inuu magiciisa-666!).
NUMER OF BAHALKA-666!
Laakiin sababta ay tirada 666? Sidee tirada this wakiil magiciisa? Waa hagaag, ha ee ha Kitaabka Quduuska ah ka jawaabo su'aashaas. Muujintii 13:18 (LB) - "... qiimaha tirsi mid ah xaashiyaha ayaa magiciisa ku dar si 666." Kitaabka Tani ayaa bayaan ay muujinaysaa in 666 waa uun QIIMAHA ee wadarta tiro ka mid ah magaca bahalka ah! Tusaale ahaan, magaca "VIX." Haddii aan u isticmaalno "tiro Roman" ka dibna V = 5, waxaan = 1, & X = 10. Markaas haddii aan ku daro qiimaha tirsi ah warqad kasta oo magaca this (5 + 1 + 10) waxaan ka heli 16. Sidaa darteed, Vix suurto gal ma noqon karto bahalka maxaa yeelay, magiciisa oo keliya kor ku darayaa in 16 (halka magaca bahalka kor u dari doonaa 666). Laakiin haddii Vix ma bahalka waa, waa kuma?
WHO WAA BAHALKA?
Sidaas WHO waa this bahalka (i.e. ka gees ah)? waa Superpower United Yurub (a soo noolaaday "Quduuska ah" Roman Empire) sida la baraa qaar ka mid ah? Ama waa bahalka oo amiir u ahaa nidaamka this soo noolaaday? Bahalka waa calaamad LABADA labada-ka boqortooyadiisa iyo hogaamiyaha! Laakiin Ugu horeyn waxa uu u taagan yahay ay HOGAAMIYE. Si ay u caddeeyaan in ay u taagan tahay dhammaadka wakhtiga hoggaamiyaha siyaasadda ee nidaamka this ugu dhakhsaha badan-soo socda aynu u noqon oo Qorniin kale ee kitaabka Muujintii. Muujintii 19: 20- "Markaas bahalkii la qabsaday, iyo nebigii beenta ahaa .... Labadani waxaa lagu tuuray iyagoo noolnool baddii dabka ahayd oo baaruuddu ka ololaysay "(NKJ). Kitaabka waxay si cad u muujinaysaa in bahalka ka dhigan SHAKHSIGA dhammaadka wakhtiga ah, waayo, isagu iyo nebigii beenta ahaa labaduba waa lagu tuuray baddii dabka ahayd!
SUUGAAN, CALAAMADDA JIRKA?
Laakiin waxa ay dhab ahaan ay calaamaddu ku taal oo ka mid ah bahalka, sumadda this hoggaamiye siyaasadeed dhammaadka wakhtiga? waxa ay noqon doontaa JIRKA ah, suugaan CALAAMADDA (ama waa calaamadda this uun tusaale, isagoo nooc ka mid ah qarsoon, macnaha asalka ah)?
sumaddii bahalka ah waxa uu noqon doonaa calaamad suugaan jirka! In Muujintii 13:16 & 14:11 dhowr tarjumaadaha kala duwan ee Kitaabka Quduuska ah (GW, NOG, EXB, NEB, & JB ah) Dawladdu in sumaddii bahalka uu noqon doono "ku tilmaamay" on aadanaha. AMPC The, NABRE, & gobolka EXB in sumaddii bahalka la tuntay doonaa dadka. Laakiin waxaan jeclaan jidka Bible Living u tarjumay Labadan aayadood ugu fiican, sida ay ku dhawaaqdo in sumaddii bahalka uu noqon doono "TATTOOED" on aadanuhu! Laakiin iyadoo aan loo eegin haddii sumaddii bahalka la tilmaamay, tuntay, ama tattooed, dhammaan turjumaadaha kuwaas oo si wadajir ah isku raaceen in ay calaamaddu ku taal noqon doonaa CALAAMADDA suugaan JIRKA in dadka kale si fudud u awoodi doonaan in ay arkaan!
QAATA CALAAMADDA = DAACAD U SHAYDDAAN YAHOW,
Haddii aad akhrido kitaabka Muujintii aad si taxadir leh (gaar ahaan cutubka 14) waxaad arki doontaa in qof kasta oo ay raalli ka aqbala sumadda bahalka la marsiinayo ciqaab doono by Ilaah. Laakiin Ilaah runtii ma aan ciqaabi doono qof sumadda this GARAAD KHASABKA iyaga ku soo kor, mana u ciqaabi doonaa qof aan garanayn aqbala sumadda this (sida qaar ka mid ah aragtiyaha shirqool baro)! Qofka ayaa og, iyagoo raalli ka aqbalaa sumadda.
Laakiin qof kasta oo ay raalli ka og ogolaanaya sumaddii bahalka ah in la dul dhigo ama jirkeeda (sidoo kale ay gacanta midig ama wejiga) doonaa si toos ah u socday ka gees ah Ilaah! Halkii la addeeco ay wax abuura, waxay halkii la addeeco Shayddaan yahow, Waxay in nuxurka noqon doonaa ballan ay DAACAD iyo daacad shaydaan Ibliiska (eeg Muujintii 13:16 labada amp & EXB tarjumaadaha Kitaabka Quduuska ah)! Oo kuwa sidaas samayn la uuna cadaabay doonaa by Ilaah! Oo iyana waxay ahaan cudurdaar la'aan doono, waayo, ma aha oo kaliya waxaa jiri doona laba markhaati (ama qorniintii nebiyada) oo u sheeg ma inay caabudaan bahalkii (ama uu taalada) ama heli sumaddii, laakiin malaa'ig samada ka timid oo kale ayaa dadka dunida degganu amri doonaa sidaas ma aha in uu sameeyo (Muujintii 14: 9)!
Sidaas daraaddeed, waa maxay magaca bahalka? Oo bal yaa hoggaamiye siyaasadeed dhammaadka wakhtiga ahaan doontaa? Ku alla kii uu yahay, mid ka mid ah wax aan ogahay xaqiiqda ah, warqadihii magiciisa kor ku dari doonaa in 666! Laakiin qof ka fikiri kartaa magac ka sii wanaagsan Roman?
First of dhan, "Roman" waxaa loo turjumi karaa sida "LATEINOS" ee luqada Giriigga. (Laakiin sababta ay u isticmaalaan luqadda Giriigga? Maxaa yeelay, inta badan ee Axdiga Cusub waxaa markii hore ku qoran Greek-ka mid yihiin kitaabka Muujintii). In luqadda Giriigga "L" ka dhigan tahay tirada 30, "A" waa 1, "T" waa 300, "E" waa 5, "I" waa 10, "N" waa 50, "O" waa 70, iyo " S "waa 200. iyaga soo dar (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) iyo waxa kuu soo baxaayo? 666!
Marka labaad, haddii uu magaca ahaayeen "Roman," waxay la mid ah cilmiga midnimada noqon lahaa sida waxa ay ka dhigan lahaa saddex waxyaalood oo ka mid ah. Ma aha oo kaliya waxa uu noqon lahaa magaca this dhammaadka wakhtiga hoggaamiye siyaasadeed, laakiin waxa ay sidoo kale ka dhigan Boqortooyada Roomaanka iyo sidoo kale Roomaanka (Catholic) Church.
Waxba ma ahan wixii aad samayn mustaqbalka, MARNA (xaalad kasta wax alla wixii!) Aqbalin in sumaddii bahalka ama isaga (i.e. ka gees ah) ama uu taalada caabudaan !!!
"Carruur yahay yaryari, waa saacaddii u dambaysay, iyo sidaad u maqasheen oo ... ka gees ah ayaa la socda ... Ninka dembiga ... wiilka halaagga maahee, kan ka geesta ah oo iska sarraysiiya wax alla waxa Ilaah la ama la caabudo oo ... Waxa uu xitaa ku fadhiisan doonaa yidhaahdo oo dhan iyo macbudka Ilaah, isagoo sheegtay inuu qudhiisu yahay Ilaah "(1 Yooxanaa 2:18 NKJ; 2 Tesaloniika 2: 3-4 NKJ; 2 Tesaloniika 2:.. 4 NLT).
"Markaasuu afkiisii ​​u furay inuu ku cayda ka gees ah Ilaah, iyo inuu caayo magiciisa, taambuugga, iyo kuwa samada deggan. Oo waxaa la siiyey isaga inay kula dagaallamo quduusiinta oo [DAACAD Masiixiyiinta] iyo in ay ka gudbaan [guulaysi] iyaga. Oo amar la siiyey in ka badan kasta qabiilka, af kasta iyo quruun. Oo isaga, aan magacooda lagu qorin kitaabka nolosha caabudi kuwa dhulka deggan oo dhan doonaa ... "(Muujintii 13: 6-8 NKJ).
"Haddii nin caabudo bahalka [i.e. ka gees ah] iyo sanamkiisa [i.e. uu taalada], oo aqbala sumadda uu fooddiisa ama waa inuu gacanta saaraa, isaga qudhiisuse wuxuu ka cabbi doonaa khamriga cadhada Ilaah, kaas oo la soo daadshay xoog buuxa galay koobkii dhirifkiisa. Oo waxaa isaga lagu silcin doonaa dab iyo baaruud joogaan tan malaa'igaha quduuska ah iyo joogitaanka Wanka [i.e. Ciise Masiix]. Oo qiiqa caddibaaddooda weligiis iyo weligiis u kori, waxayna leeyihiin habeen iyo maalin nasasho ma ama, oo kuwa caabuda bahalka iyo sanamkiisa, iyo ku alla kii aqbala sumadda magiciisa "(Muujintii 14: 9-11 NKJ).
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sumaddii bahalka ah, fadlan akhri "Muujintii Yimaado Alive" iyo buugaag waxaa laga heli karaa BILAASH ee "The ka gees ah & The Final 7 Years.": www.TheBibleComesAlive.com
somali = somali
Haddii aad jeclaan lahayd in la akhriyo mid ka mid ah articles ama buugaag aan afkaaga ku qoran, kaliya riix link soo socda: https://translate.google.com. link Tani turjumi doonaa dhammaan qoraallada aan ka Ingiriisi si afkaaga. Laakiin waxaa kaliya turjumi karaa 1 page waqti.